Ballan qabso, soo wac 040 554 82 00
Klinikka Elo waa isbitaal cusub oo aan mid la mid ah jirin. Fikradeena iyo ujeedadeena waa in aan daaweyno oo aan u adeegno bukaanka anaga oo qadarineyna luuqadooda iyo dhaqankooda. Arintaasna hada waa suurta gal sababta oo ah waxaa jooga Finland dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin oo aqoonsi leh oo aan aheyn finish. Waxaa caadi ah in qofka ajnabiga ah marka uu aado isbitaallada in uu la kulmo dhibaato. Turjumaanada ballamaha loogu yeero waxaa laga yaabaa in aaney aheyn dad caafimaadka bartey oo taas daradeed aaney si fiican u fahmi karin waxa dhakhtarka uu ujeedo. Waxaa laga yaabaa in aan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha jooga isbitaallada finishka ah in aaney si fiican u fahmi karin qofka ajnabiga dhaqankiisa iyo nolol maalmeedkiisa siduu uuga duwanyahay qofka finishka ah. Waxyaabahaan waxay keeni karaan dhibaatooyin oo ka mid yahay ku noqoshaha dhakhtartka uu bato, in qof wax khalad ku takhasusey laguu ama khaladaad caafimaadka ku saabsan.
Kooxda Klinikka Elo waxa uu ka koobanyahay koox dhakhtarro iyo kaalkaalisooyin oo xirfad leh oo ku hadla af soomaali, af carabi, afka turkiga, ah iiraani, afka shiinaha iyo luuqado kale. Taas daraadeed ajnabiga waxaa lagu qaabili karaa afkooga hooyo. Arintaasna waxay keeneysaa in dhib dhanka fahanka aaney dhex marin shaqaalaha isbitaalka iyo macaamiilka. Isfahamka luuqad ahaan waa arin aad u muhiim ah shaqaalaha iyo macaamiisha ay si fiican iskugu fahmaan labadabana niyada ay uugu degdo.
In kasta oo ay shaqaalaha Elo Klinikka ay ku hadlaan luuqado kala duwan oo dhaqamo kala duwan ay leeyihiin, waxaa kuligeen isku keen xiraya luuqada finishka, hab dhaqanka shaqada ee finishka iyo dhaqanka finishka. Finland dhanka dhakhaatiirta iyo caafimaadka waa midda uugu fiican aduunka waxaanan ku faraxsannahay in aan ka fa’iidaysan karno arintaas.
kaaley isniinta illaa jimcaha wakhtiga 12:00 illaa 20:00
Wakhtiyada aan furanahay:
Sabtida iyo axada waan xiranahay
telefoon: +358 40 554 82 00